एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन - Hello Patrika
प्रमुख समाचार • विश्व • समसामयिक
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन
काठमाडौं, २९ असोज, २०७६ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । संघको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४२ जना पदाधिकारीको लागि आज काठमाडौंको हायात होटलमा निर्वाचन हुन लागेको हो । महाधिवेशनमा ६० भन्दा धेरै देशबाट २६५६ जना प्रतिनिधि आएका छन् ।
आज साँझ ५ बजे देखि राति १० सम्म एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विद्युतीय मतदान गर्नेछन् । मतदान सम्पन्न भएको दर्ुइ घण्टाभित्रमा नै मतगणनाको नतिजा आउने निर्वाचन समितिले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् ।
कुल आचार्यको प्यानलमा पाँच उपाध्यक्षमा डा. केशव पौडेल (अमेरिका), मन केसी (अष्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व) र रबिना थापा (अमेरिका)लाई अगाडि सारिएको छ ।यस्तै आचार्य समूहबाट महासचिवमा बेल्जियम निवासी व्यवसायी जानकी गुरुङलाई अघि सारेका छन् । गुरुङ एनआरएनएकी वर्तमान सचिव हुन् ।यस्तै वर्तमान सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले आचार्य समूहबाट कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
यसैगरी अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तको प्यानलमा ५ उपाध्यक्षमा डा. बद्री केसी (रसिया), हिक्मत थापा (अफ्रिका), सोनाम लामा (अमेरिका), अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (बेल्जियम) र धर्मराज अधिकारी (अष्ट्रेलिया) छन् । पन्त समूहले महासचिवमा बेलायत निवासी प्राध्यापक डा. हेमराज शर्मालाई अघि सारेको छ ।
संघको चुनावलाई राजनीतिकरण भएको भन्दै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सम्मेलनको उदघाटन बहिस्कार गरेका भए पनि अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तलाई नेकपा निकट र कुल आचार्यलाई कांग्रेसनिकटका रुपमा हेरिएको छ ।
उपाध्यक्षमा जित्ने मन केसी को दावि
यसैगरी एनआरएनए उपाध्यक्षका प्रत्यासी मन केसीले पनि एनआरएनको हकहितको अभियानमा लागेकोले अग्रजहरुबाट सहयोग हुने भएकोले आफुले उपाध्यक्षमा जित्ने बताएका छन् । एनआरएनलाई परिपक्व नेतृत्व आवश्यक भएकोले आफ्नो आवश्यकता साथिभाईहरुले खड्केको महशुष गरिरहनु भएकोले अत्यधिक मत दिइ बिजयी गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
आज नेकपाको चियापान कार्यक्रम
एनआरएन महासचिवमा जानकी गुरुङ र हेमराज शर्मा भिड्दै, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजकमा केपी सिटौला बलियो